दीपेन्द्र झा - कान्तिपुर समाचार
संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुका मुख्य दुई उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु । दोस्रो, देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु । आत्मामा हात राखेर प्रश्न गरौं, के नयाँ संविधानले हाम्रो समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल भएको छ ?
संविधान संशोधन किन ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’
चेपुवामा प्रदेश सरकार
अझै पनि जनकपुरबाट म काठमाडौं आउँदा ठूला कर्मचारीहरूले गर्ने पहिलो प्रश्न हो– देशले संघीयता धान्ला र ? संघीयता चल्न सक्छ ? यो कस्तो विडम्बना हो– जसको काँधमा संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी छ, उनीहरू नै यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो, जिम्मेवार अधिकारीहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् ।
आजकै दिन अर्थात् २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोले मधेसका लागि दिएको सहादतबाट मधेस आन्दोलनले उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । तसर्थ यो दिन मधेसी जनताको मानसपटलमा बलिदानी दिवसका रूपमा सदासर्वदाका लागि दर्ज भएको छ ।
सरकारको आयु र संवैधानिक सवाल
देउवाले प्रतिनिधिसभा चुनावको मनोयन दर्ता हुन एक दिनअगावै राजीनामा गरेर आफ्नो सरकारलाई कामचलाउको हैसियतमा ल्याउनु नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।
दीपेन्द्र झाका लेखहरु :
शक्ति पुन: सिंहदरबारमै
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले धमाधम कानुन बनिरहेका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हातमा छोडिएको छ । हुनलाई कानुन बनाउने काम विधायिकाको हो ।
मधेस स्थिरताको मुद्दा बनोस्
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन् । यो भ्रमण विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सत्तामा आसिन भएपछि गर्ने गरेको दक्षिण छिमेकीको सद्भावना भ्रमणकै निरन्तरता हो ।
संविधान संशोधन किन ?
स्थानीय तहको संख्या नबढाउने निर्णयका साथ मधेसी दलहरूसँग भएको सहमति सरकारले तोडेको छ । खासगरी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद् खोलाउन सरकारले मधेसी दलसँग गरेको वाचा २४ घन्टा नबित्दै तोडेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अन्योलमा धकेलिएको छ ।